माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको पहिलो दिन ५१ जना विद्यार्थी अनुपस्थित ! – ebaglung.com
माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको पहिलो दिन ५१ जना विद्यार्थी अनुपस्थित !
२०७५ चैत्र १०, आईतवार २०:३८	Top News, थप समाचार
कोपिला कँडेल। बागलुङ २०७५ चैत १० । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आईतबार देखि सुरू भएको छ । संघीय संरचना अनुसार पहिलोपटक एसईई परीक्षा भएको हो । परीक्षाको पहिलो दिन परीक्षार्थीहरुले अंग्रेजी विषयको जाँच दिएका छन् ।
परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरबाट झण्डै ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएका छन् । चैत २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशबाट जम्मा ४८ हजार ६३ जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पहिलोपटक एसइई परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीदलगायतका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बताएको छ ।
परिक्षामा बागलुङका कुल ५ हजार ५ सय २२ जना परिक्षार्थी मध्य ५१ जना अनुपस्थित रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई बागलुङले जनाएको छ । यसरी यहाँ कुल ५ हजार ३ सय २३ जना विद्यार्थीले परिक्षा दिएका हुन् । परिक्षामा प्रभा मावि बोहोरागाउँका ७ दिनका कियापुत्री कैलास पौडेल, जनताधन माविका दृष्टिबिहिन दिना पाण्डेय र २६ जना बहिराहरु पनि सहभागी भएको ईकाई प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेल, प्रहरी उपरिक्षक कृष्णहरि शर्मा, ईकाई प्रमुख उपाध्याय लगायत परिक्षा समन्वय समितिको टोली पहिलो दिन शान्ति मावि कुश्मिसेरा, जनताधन मावि नारायणस्थान, त्रिभुवन मावि पैँयुपाटामा अवलोकनका लागि गएको उपाध्यायले बताउनुभयो । त्यसैगरी जिल्ला स्थित बिभिन्न ६ वटा बिद्यालयका प्राबिधिक तर्फका बिद्यार्थीले बिद्यामन्दिर माबि बागलुङबाट परिक्षा दिएका छन् ।
त्यसैगरी एसईईमा खुल्ला तर्फका सबै र मुक्तिनाथ बेद्बिद्याश्रम कुडुले फेदीका ९ जना बिद्यार्थीले कालिका कन्यामन्दिर माबि बागलुङ्ग बाट परिक्षा दिईरहेका छन् । ३ सय ४४ परिक्षार्थी भनिएको सो बिद्यालयमा ४ जना अनुपस्थीत रहेको केन्द्राध्यक्ष एबं प्रधानाध्यापक धनराज सापकोटाले जानकारी दिए ।
जिल्लामा ३१ वटा परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । परिक्षा केन्द्रमा ३१ जना केन्द्राध्यक्ष, ३९ जना सहायक केन्द्राध्यक्ष, ५६ परिक्षा सहायक, २ सय ७८ जना निरिक्षक, १ सय १२ जना सहयोगी कर्मचारी र ४ सय ६५ जना सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेको छ । परिक्षाको समयमा महिनाबारी हुँदा समेत असहजता नहोस भन्ने उद्धेश्यले छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने वातावरण मिलाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको सहयोगमा ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेनेटरी प्याड खरिद गरेर वितरण गरिएको हो । परिक्षामा कुनै अमर्यादित व्यवहार गरेमा ६ महिना कैद देखि १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिमानाको व्यवस्था रहेकाले मर्यादाभित्र रहेर परिक्षा दिन विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएको छ ।
ड्यूटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीमाथी हातपात गर्ने दुई सवारी चालक प्रहरी नियन्त्रणमा !